မှန်ကန်သော ရှုထောင့်မှကြည့်မြင်တတ်ခြင်း – အရိုးမား မြန်မာခရစ်ယာန်စာပေ
29Nov 2013 14 Aug 2018
ဘုရင်ခံ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Bradford သည် အောက်ပါ ကြေငြာချက်ကို ၁၆၂၃ ခုနှစ် တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အချိန်ကား ဥရောပတိုက်မှ အမေရိကန် နိုင်ငံသို့ အန္တလန်တိတ် သမုဒ္ဒယာ ကို ခက်ခက်ခဲခဲ ဖြတ်ကျော်ရောက်ရှိပြီး တတိယမြောက်နှစ်တွင်ဖြစ်သည်။
“နယ်မြေသစ်ကို ရောက်ရှိသူ အားလုံး သိစေရန် ..
ဘုရားသခင် သည် ယခုနှစ် အတွက် လုံလောက် ရုံမျှကမ ကြွယ်ဝစွာသော ကောက်ပဲသီးနှံများ၊ အင်ဒီယန်းပြောင်းဖူး၊ ဂျုံ၊ ပဲ၊ သခွါးသီး နှင့် ခြံထွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ကို ချပေးသနားလျက် ကောင်းကြီးပေးပါတယ်။ ထို့အပြင် အသားစားဖို့ရန် တောတိရိစ္ဆာန်များ၊ ရေနေသတ္တဝါ ငါးများ၊ ကမာ ခရုကောင်များ ကိုလည် အလျှံပယ် ပေးထားတဲ့ အပြင် လူရိုင်း များ၏ အန္တရယ်ပြု ခြင်းမှလည်း အကာအကွယ် ပေးခဲ့ပါတယ်၊ ကပ်ရောဂါ နှင့် ဖျားနာခြင်း အမျိုးမျိုးမှလည်း ချမ်းသာခွင့် ကိုပေးပါတယ်။ ထို့ကြောင့် သင်နှင့် သင့်အိမ်သူ အိမ်သားများ အားလုံး၊ ကလေးသူငယ်များပါ မကျန် နယ်မြေသစ် (Plymouth) ကိုရောက်ရှိသည့် တတိယမြောက်နှစ်။ ခရစ်သက္ကရဇ် ၁၆၂၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၂၉) ရက် ကြာသပတေး နေ့၊ (၉) နာရီ မှ (၁၂) နာရီ အတွင်း ပြုလုပ်မည့် ဝတ်ပြု အစည်းအဝေးတွင် တရားဟော ဆရာ၏ တရားဒေသနာ ခံယူရန် နှင့် ဘုရားသခင်ပေးသော ကျေးဇူးတော် အပေါင်းတို့ကို ချီးမွမ်း ထောမနာပြုရန် လာရောက်ပါဝင် ကြစေလိုပါတယ်”
ဧဖက် ၅း၁၉ – ၂၀ “ဆာလံသီချင်းမှစသော ဓမ္မသီချင်း အမျိုးမျိုးတို့ကို အချင်းချင်းပြောဆိုဘတ်ရွတ်၍၊ နူးညွတ်သောစိတ်နှလုံးနှင့် သခင်ဘုရားရှေ့တော်၌ ကျူးဧ၍ သီဆို ကြလော့။ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့၌ ကျေးဇူးတော်ကြီးလှပါ၏ဟု ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ နာမတော်ကိုထောက်၍၊ ခမည်းတော် ဘုရားသခင့်ရှေ့၊ ကာလအစဉ်မပြတ် ဝန်ခံကြလော့။”
၁ တိ ၅း၁၆ -၁၈ “အစဉ်မပြတ် ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့။ မခြားမလပ် ဆုတောင်း ပဌနာပြုကြလော့။ အရာရာ၌ ကျေးဇူးကို ချီးမွမ်းကြလော့။ အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့သည် ထိုသို့ကျင့်စေခြင်းငှါ၊ ယေရှုခရစ်၌ ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိ၏။”
တမန်တော်ရှင်ပေါလု သည် အထက်ပါကျမ်းပိုဒ်များတွင် ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းခြင်း၊ ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းခြင်း တို့ကို အလေးထား ဖော်ပြထားပြီး မည်သည့် အချိန်ကာလတွင် မဆို၊ ကာလအစဉ်မပြတ်၊ မခြားမလပ် ပြုလုပ်ရန် တိုက်တွန်း ဖော်ပြထားသည်။ ဤ ကျမ်းပိုဒ် များကိုဖတ်သောအခါ ကျေးဇူးတော်ချီမွမ်းခြင်း၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ မခြားမလပ် ဆုတောင်ခြင်း၊ ဆာလံသီချင်း တို့ကို သီဆိုခြင်း စသည်တို့ကို ဘုရားကျောင်း တွင် ပြုလုပ်ရန်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်သည် ဟု ထင်မှတ် မှားနိုင်စရာ အကြောင်း ရှိသည်။ သို့သော် တမန်တော်ရှင်ပေါလု က အထက်ပါ အမှုအရာ တို့ကို ဘုရားကျောင်း တွင် သာမက ယုံကြည်သူတိုင်း၏ နေ့စဉ် အသက်တာတွင် လုပ်ဆောင်ရန် တိုက်တွန်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူ အားလုံး နာရီတိုင်း စက္ကန့်တိုင်း စဉ်ဆက်မပြတ် လိုက်နာ ကျင့်သုံးရမည် ကျင့်ဝတ် အနေဖြင့် ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေ၏ ဘ၀ တစ်လျှောက်လုံး တစက္ကန့် မခြား ကျင့်သုံး လိုက်နာနိုင်ပါမလား ? မိတ်ဆွေ သံသယ ဝင်ကောင်း ရှိနိုင်ပါသည်။ မိတ်ဆွေ၏ မှန်ကန်သော ရှုထောင့် မှ ကြည့်မြင် တတ်ခြင်း အပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
အမေရိကားတိုက် နယ်မြေသစ် ကို ဥရောပမှ ရောက်ရှိလာကြပြီး အစောပိုင်း နှစ်များတွင် သဘောၤပေါ်လိုက်ပါလာသူ ဦးရေ၏ သုံးပုံ နှစ်ပုံခန့် သည် ပြင်းထန်သော ရာသီဥတု၊ ကြမ်းတမ်းသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေများ၊ မတူခြားနားသော အစားအသောက်၊ ရောဂါအမျိုးမျိုးနှင့် ဌါနေလူရိုင်း တို့၏ တိုက်ခိုက်မှုတို့ကြောင့် သေကြေ ပျက်စီးခဲ့ကြရသည်။ ထိုသို့ဆိုသော် အထက်တွင် ဖော်ပြသော ဘုရင်ခံ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Bradford အမြင် ရှုထောင့်သည် မည်သို့သော အရပ်မှကြည့်၍ မြင်သော အမြင်ဖြစ်ပါမည်နည်း? စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းသည့် စဉ်းစားဆင်ခြင်သင့်သော အချက်ဖြစ်ပေသည်။
ရပ်ဝေး တက္ကသိုလ် တစ်ခုတွင် ပညာ သင်ကြားရန် သွားရောက်သော ကျောင်းသူ တစ်ယောက်က အမေ ထံသို့ အောက်ပါအတိုင်း စာရေးခဲ့ဘူးသည် ဟုဆိုသည်။
သမီးစာမှန်မှန်မရေးနိုင်လို့ ခွင့်လွတ်ပါ။ အမှန်တော့ သမီး ညာ လက်နဲ့ ဘယ်ဘက်ခြေထောက် ကျိုးသွားလို့ စာမရေးနိုင်ဒါပါ…. သမီး နေတဲ့ အဆောင် မီးလောင်တော့ ဒုတိယထပ် ကနေ ခုန်ချ ရင်း လက်နဲ့ ခြေထောက် ကျိုးသွားတယ်။ သမီး ကံကောင်းတယ်လို့ ဆိုရမယ် လူတယောက်က မီးသတ်ကို အမြန် အကြောင်းကြားလိုက်တော့ မီးသတ်သမားတွေ အချိန်မီ ရောက်လာကြတယ်။ သမီး ကို လည်း အမြန်ဆုံး ဆေးရုံတင်လိုက်ကြတယ်။ ဆေးရုံမှ တပတ်လောက် နေလိုက်ရတယ်။ မီးသတ်သမားကလေး မောင်လှ က သမီး ကို လိုလေသေး မရှိ ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးပါတယ်။ ဆေးရုံ မှာလည်း နေ့တိုင်းလာကြည့်တယ်။ သမီး တို့ နေတဲ့ အဆောင်ကို ပြန်ပြင်တာ လည်းတော်ရုံနဲ့ မပြီးနိုင်ဘူးလေ၊ အဲဒါနဲ့ သမီးလည်း မောင်လှ ရဲ့အိမ်မှာဘဲ ခဏသွားနေလိုက်တယ်။ သူ သမီးအပေါ် အရမ်းသဘောကောင်းပါတယ်။ အခု သမီး ကိုယ်ဝန် ရှိနေပြီ အမေရဲ့… မောင်လှ လည်း သူ့ မိန်းမနဲ့ တရားဝင် ကွာရှင်းခွင့် ရတာနဲ့ သမီးတို့ လက်ထပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ အမေတို့ အားလုံးနေကောင်း ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ သမီးလည်း နေကောင်းပါတယ်။ နောက်ဆိုရင် သမီး စာမှန်မှန် ရေးနိုင်အောင် ကျိုးစားပါ့မယ်။
P.S သမီးအပေါ်မှာ ရေးထားဒါတွေ အားလုံး တခုမှ မမှန်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် သမီး အောင်စာရင်းတွေ ထွက်လာတယ်၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှာ အမှတ် (၄၁) မှတ် ဘဲရတယ်၊ ဓါတုဗေဒဘာသာ ကျတယ်။ သမီးရဲ့ အမှတ်စာရင်းအပေါ် အမေတို့ ရှုထောင့် မှန်ကနေ မြင်တတ်အောင် အပေါ်က စာတွေကို သမီး လျှောက်ရေးထားဒါပါ…
တမန်တော်ရှင်ပေါလု မှာကြားခဲ့သလို အချိန်တိုင်း မခြားမလတ် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်း တတ်ဖို့ရန် အတွက် ကျွန်တော် ကျွန်မတို့အားလုံးမှာလည်း မှန်ကန်သော ရှုထောင့်မှ အရာခပ်သိမ်းကို ကြည့်မြင် သုံးသတ်ခံယူတတ်ဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါမှလည်း အချိန်တိုင်း စက္ကန့်တိုင်း မှာ ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းတတ်သူ ယုံကြည်သူသားသမီးများဖြစ်လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
မခြားမလပ် ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်း ရန် ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ ကို တားဆီးသော အချက် အဓိက (၃) ချက်ရှိသည်။
ပထမအချက်မှာ ကျွန်တော်တို့၏ မာန်မာနဖြစ်သည်။ လူအတော်များများသည် မိမိ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်မှု။ အောင်မြင်မှု အားလုံး မိမိကိုယ်တိုင်၏ ကျိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့်ဖြစ်သည် ဟုခံယူကြသည်။ သည်အခြေအနေအထိရောက်အောင်၊ မိမိအချိန်ဘယ်လောက်ကြာအောင် ပေးဆပ်ခဲ့သည်၊ ဘယ်လောက် အထိအောင် စာကျိုးစား ကျက်မှတ် လေ့လာခဲ့သည် ဆိုသည့် အချက်ကိုသာ စဉ်းစားပြီး မည်သူ တစ်ဦးယောက်မျှ ၏ ကူညီမှု ဆောင်မမှု ကြောင့် မဟုတ် ဟု ယူဆသဖြင့် ကျေးဇူးတင် တတ်ရမည့်အစား မာန်မာနတက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့သည် အရာရာကို မိမိကိုယ်တိုင် ပြုသော ကျိုးစားအားထုတ်မှု အပေါ်တွင် ရပ်တည်ပြီး ထိုရှုထောင့်မှ ကြည့်မြင် သုံးသပ်၊ ဆင်ခြင်တတ်ကြသည်။
ဒုတိယအချက်မှာ အရာရာ တိုင်းကို အဆိုးမြင်ဝါဒဖြင့် သုံးသတ်ကြည့်မြင်ပြီး အပြစ်တင်ဖို့ရန်၊ အပြစ်ဖို့ရန်သာ စဉ်းစားတတ်သော အကျင့်ဆိုးကြောင့်ဖြစ်သည်။ တခါက အမျိုးသမီးတစ်ယောက် သည် အရာရာတိုင်းတွင် ကျေနပ်ရောင့်ရဲ သည်မရှိဘဲ အချိန်တိုင်း၊ အဖြစ်အပျက်တိုင်း အပေါ်တွင် မည်တွန်တောက်တီး တတ်သည် ဟု ဆိုသည်။ သူ၏အခြေအနေကို နားလည်သဘောပေါက်သော သင်းအုပ်ဆရာက တစ်နေ့သူမကို သွန်သင်ဆုံးမလိုသဖြင့် သူမ၏ အားလူး စိုက်ခင်း ကိုချီးကျူးကာ စကား စသည်။ “Mary…နင့် အာလူး စိုက်ခင်း ကအရမ်းကောင်း ပါလား… ဒီနှစ်တော့ နင် ပျော်ရ ရွှင်ရမဲ့ နှစ်ဘဲ” ဟု ဆိုရုံ ရှိသေးသည် သူမ ပြန်ဖြေလိုက်သည်မှာ “အာလူးခင်း ကတော့ အရမ်းကောင်း တယ် ဒါပေမယ့် နှစ်တိုင်း မကောင်းတဲ့၊ မအောင်တဲ့ အားလူးတွေ နဲ့ ကျွန်မရဲ့ ဝက်တွေကို ကျွေးမွေးနေကျ…အခုနှစ် ကျွန်မရဲ့ ဝက်တွေကို ဘယ်လို ကျွေးရတော့မလဲ.. စိတ်နှစ်ပါတယ်။”။ ထိုသူတို့သည် အရာရာတိုင်း ပျက်စီးယိုယွင်းခြင်း ဖက်သို့ဦးတည်သည်၊ လောကကြီးသည် လှည့်ဖျားခြင်း၊ သွေးဆောင်ခြင်း၊ ကောက်ကျစ် စဉ်းလဲခြင်း တို့ဖြင့်သာ ပြည့်နှက် နေသည့် နေရာဖြစ်သည်၊ ဟုစွဲစွဲမြဲမြဲယုံကြည်သူများဖြစ်ပြီး ထိုရှုထောင့် နေရာမှသာ ကြည့်မြင်၊ သုံးသတ်၊ ဆင်ခြင် တတ်ကြသော သူများဖြစ်သည်။
တတိယအချက်မှာ ကျွန်တော်တို့၏ နမော်နမဲ့ ပြုမူတတ်သော၊ လောကကြီးရဲ့ ထုံးစံပါ၊ ဘာမှ ထူးဆန်းတဲ့ အရာမဟုတ်ပါဘူး ဟု လွယ်လွယ်ထားတတ်သော၊ အရေးတယူ မထားတတ်သော အကျင့်ဆိုးကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းသော သာယာလှပသည့် မနက်ခင်းတိုင်းကို တသက်လုံး ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာ တွေ့မြင်၊ ခံစား ပြီးဖြတ်သန်းလာခဲ့ ကြရသည်။ သို့သော် လူတိုင်းလူတိုင်း လောကကြီး၏ ထုံးတမ်းစဉ်လာ တစ်ခုအနေဖြင့်သာ လွယ်လွယ် သဘောထားပြီး မနက်ခင်းတိုင်းများစွာ တို့ကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးသနားသော ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ရန် မေ့လျော့ လေ့ရှိကြသည်။ လူသားများ စားဖို့ ပေါင်မုန့်၊ ထမင်း နှင့် အသားများ နေ့တိုင်း ကောင်းကင် မှ တဖြုတ်ဖြုတ် ကျလာမည်ဆိုလျှင် လူသားများသည် ဘုရားသခင်ကို နေ့တိုင်း ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်း ကြမည်ဟု ထင်စရာ အကြောင်းရှိသည်။ မထင်ပါနှင့် မိတ်ဆွေ လူသားတို့မည်သည် နေ့စဉ်ရက်ဆက် ဖြစ်ပျက်သော အရာများအပေါ်တွင် အရေးတယူ မထားတတ်သော အမျိုးများဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်မည့်အစား ဘုရားသခင် ချပေးသော အစားအစာများ အထဲမှ ကောက်ဖို့ အချိန် မရဘဲ ပုပ်ပွပျက်စီး နံဟောင်သွားမည့် အစားအစာများ အတွက် စိတ်ညစ်၊ မည်တွန်တောက်တီး မည့်သူ ပိုများလိမ့်မည် ဟု ထင်ပါသည်။ ဂျူးလူမျိုုးများ နှစ် လေးဆယ် တောထဲတွင် တဝဲလည်လည် ဖြစ်နေချိန်တွင် ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်မှ မန္နမုန့် ချပေးခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းစရာဖြစ်သည်၊ သို့သော် အသားစားချင်ပါသည် ထပ်မံ ကွန်ပလင်း တက်သည်။ လူသား အများစု သည် မိမိ၏ စိတ်ကျေနပ်မှု၊ ရောင့်ရဲမှုကို သာ အဓိကထားပြီး ကျန်သည့် အရာကိစ္စအားလုံးကို အလေးတယူ မထားဘဲ နမော်နမဲ့ ကြည့်မြင် သုံးသတ်၊ ဆင်ခြင် တတ်ကြသည်။
Rudyard Kipling သည် အောင်မြင်ကျော်ကြားသော စာရေးဆရာ တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ စာရေးခြင်းဖြင့် ချမ်းသာကြွယ်ဝသူ တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ တစ်နေ့ သတင်းထောက် တစ်ယောက်က သူ့အား – “ဆရာ ရေးတဲ့ စာအုပ်တွေ အလွန့် အလွန်ရောင်းကောင်းလို့ ဆရာ့ရဲ့ စာကြောင်း ဝါကျ တစ်ကြောင်း တိုင်းရဲ့ ဈေးကို တွက်မယ် ဆိုရင် ဒေါ်လာ ၁၀၀ လောက်တန်တယ် လို့ကြားပါတယ်၊ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော် ဆရာ့ကို အခုဒေါ်လာ ၁၀၀ ပေးပါ့မယ်၊ ဆရာ အနေနဲ့ ကျွန်တော့်ကို စာကြောင်း တစ်ကြောင်းရေးပေးပါ” လို့ တောင်းဆိုတယ်။ Rudyard Kipling တစ်မိနစ် ခန့်တွေဝေသွားကာ ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိဖြစ်သွားသည်။ သူလည်း လူသားတစ်ယောက် ပီပီ သူ စာရေး ခြင်းဖြင့် ငွေအမြောက်အများရရှိခဲ့သော်လည်း ထိုမျှ အသေးစိတ်တွက်ချက်ခဲ့ဘူးခြင်း မရှိသဖြင့် သူ၏ဝင်ငွေ အပေါ် အထူးတဆန်းဖြစ်သွားပုံရသည်။ ထို့နောက် သတင်းထောက်၏ စာအုပ်ပေါ် သူရေးပေးလိုက်သည့် ဒေါ်လာ ၁၀၀ တန် စာတစ်ကြောင်း ကတော့ “Thanks” ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ် သူရေးလိုက်တဲ့ Thanks ဟူသော စာလုံးသည် ဒေါ်လာ တစ်ရာမက သန်းနှင့် ချီတန်ဖိုး ရှိသော စကားလုံး၊ စာကြောင်းဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူ ခရစ်ယာန်တိုင်း၏ အသက်တာတွင် Thank you Lord ဆိုသော အရာသည် တန်ဖိုးဖြတ်၍ မရသော အရာဖြစ်သည်။
ခရစ်ယာန် အသက်တာတွင် ကျေးဇူးတင်တတ်သော နှလုံးသား ရှိခြင်းသည် အနှစ်ဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေ မကျေမနပ် ဖြစ်နေသော အရာ အဖြစ်အပျက်များကို အသေအချာ ရှုထောင့် စုံမှ သုံးသတ်ကြည့်ပါ။ အရာရာတိုင်းတွင် ကျေးဇူးတင်စရာ အကြောင်း ရှိစမြဲဖြစ်သည်ကို တွေ့လာမည်ဖြစ်သည်။ ဤ ဆောင်းပါး၏ အစတွင် ဖော်ပြခဲ့သော ဘုရင်ခံအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Bradford ၏ ကြေငြာ ချက်ကို အနည်းငယ် ထပ်မံလေ့လာမည် ဆိုလျှင်၊ ဥရောပမှ ထွက်ခွါလာကြစဉ် ပါလာသူ အဖွဲ့ဝင် မိသားစု၊ မိတ်ဆွေ များ တစ်နှစ် နှစ် နှစ်အတွင်း တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် သေဆုံးသွားကြရာ ထိုကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်သည့် အချိန်တွင် သုံးပုံ နှစ်ပုံ ကျော် သေကျေခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ စားဖို့ သောက်ဖို့ အတွက် သစ်ဥသစ်ဖု မှအစ အသီးအနှံများကို ခက်ခက်ခဲခဲ စုဆောင်း ရှာဖွေရပြီး မထင်မှတ်သော ရောဂါ မျိုးစုံကိုလည်း ခါးစည်းခံစား ခဲ့ကြရသည်။ ဖော်ရွေပြီး ခင်မင်စရာ ကောင်းသော ဒေသခံ အင်းဒီးယန်း လူမျိုး အနည်းငယ် ရှိသော်လည်း အများစုမှာ ရိုင်းစိုင်းပြီး ရန်လိုသော သဘောရှိသည်။ ဘုရင်ခံအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Bradford မည်သည့် ရှုထောင့် မှ ကြည့်မြင်ပြီး ကျေးဇူးတင်သော နှလုံးသား နှင့် ဝမ်းသာရွှင်လန်းသော အသက်တာကို ရရှိခဲ့ပါသနည်း။ စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေသာ ထိုအချိန်တွင် ရှိခဲ့မည် ဆိုလျှင် မိမိ၏ ဘဝကို မည်သို့ စဉ်းစား၊ ရှုမြင် ခံယူပါမည်နည်း? ဥရောပတိုက်မှ ကနဦး ရောက်ရှိ လာကြသော သူတို့၏ ထိုကျေးဇူးတင်တတ်သော နှလုံးသား၊ ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းခဲ့ခြင်း ၏ အသီးအပွင့်ကို ယနေ့ အမေရိကန် နိုင်ငံက ခံစား၊ ဆွတ်ခူး စားသုံးနေကြသည်ဟု ဆိုချင်ပါသည်။
မူလတန်း ဘ၀ မြန်မာဖတ်စာ တွင် သင်ကြားခဲ့ဖူးသော ပုံပြင် တစ်ပုဒ် ကိုသတိရမိသည်။ မျက်မမြင် ပုန္နား ခြောက်ယောက်နှင့် ဆင်ကြီးတစ်ကောင် အကြောင်းဖြစ်သည်။ မျက်စိ မမြင်သော ပုန္နား ခြောက်ယောက် အား ဆင်ကြီးတစ်ကောင်ကိုလက်နှင့် ကိုင်စေပြီး ဆင်သည် မည်ကဲ့သို့သော တိရိစ္ဆာန် ဖြစ်သည်ကို ပြောခိုင်းသည်။ ပထမ ပုန္နားက ခြေထောက်ကို ကိုင်ပြီး အတန်ကြာ ဟိုစမ်းသည်စမ်းပြုပြီးသော အခါ ဆင်သည် တိုင် ကဲ့သို့သော တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်သည် ဟု မှတ်ချက်ချသည်။ ဒုတိယ ပုန္နားသည် ခုံတစ်လုံးပေါ်မှ ဆင်၏ ခန္ဓာကိုယ် စမ်းပြီး ဆင်သည် နံရံကြီး တစ်ခုကဲ့သို့သော သတ္တဝါဖြစ်သည် ဟု မှတ်ချက်ချသည်။ နောက်တစ်ယောက် က ဆင်၏ နာမောင်းကို စမ်းရင်း ဆင် ဆိုသော သတ္တဝါသည် မြွေကဲ့သို့သော သတ္တဝါဖြစ်သည် ဟု ဆိုသည်။ ထို့အတူ ဆင်၏အမြီး ကိုစမ်းမိသော ပုန္နားက ဆင် သည် ကြိုးတစ်ချောင်း နှင့် တူ သည် ဟူ၍ ၎င်း၊ ဆင်၏ အဆွယ် ကိုစမ်းမိသူက ဆင်ဟူသော သတ္တဝါသည် ဝါးလုံး တစ်လုံးနှင့် တူသည် ဟူ၍ ၎င်း မှတ်ချက်ချသည်။ နောက်ဆုံး ပုန္နားက ဆင်၏ မည်သည့် နေရာကို စမ်းမိပြီး မည်သို့ မှတ်ချက် ချခဲ့သည်ကိုကား မမှတ်မိတော့ပါ၊ သို့သော် ယနေ့ စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေများကို သဘောပေါက် နားလည် စေချင်သည့် အချက်မှာ မည်သည့် အရာ၊ အဖြစ်အပျက် ကို မဆို မှန်ကန်သော ရှုထောင့်၊ ရှုထောင့် စုံ မှကြည့်မြင် တတ်ခြင်း သည် အလွန်အရေးကြီးသည် ဆိုသည့် အချက်ဖြစ်သည်။
မာန်မာန၊ အဆိုးမြင်ဝါဒ နှင့် နမော်နမဲ့ ဖြင့်သာ ကြည့်မြင်တတ်သော ရှုထောင့်မှ အပြင်ကို ထွက်လာပြီး သမ္မာကျမ်းစာ ၏သွန်သင်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသည့် ရှုထောင့် မှကြည့်တတ်၊ မြင်တတ်၊ သုံးသတ်တတ် ခံယူတတ် မှသာလျှင် တမန်တော် ရှင်ပေါလု ဖော်ပြသလို မခြားမလပ် ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်း သောသူများ ဖြစ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
Happy Thanksgiving to you all. (2013)
Tags: ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း, မြန်မာခရစ်ယာန်စာပေ, Myanmar Christian, Thawngno
Previous Peter Lwin (Youth Pastor’s Sermon)
Next The Nature of Christian Conversion
Pingback: မွန္ကန္ေသာ ရႈေထာင့္မွၾကည့္ျမင္တတ္ျခင္း | Calvary Burmese Church